အတတ်ပညာ Clip Cap စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Zhongxing
SHAOHU@ အရည်အသွေးမြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဦးထုပ် : ဤ dis[osable non ယက်ဦးထုပ်) သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ထူးခြားသော အနံ့အသက်မရှိ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး နူးညံ့သောကြောင့် အသုံးပြုရသည်မှာ စိတ်ချယုံကြည်ရစေပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်- တစ်ခါသုံး bouffant ဦးထုပ်များသည် အလေးချိန် မြင့်မားပြီး အသက်ရှူရလွယ်ကူပါသည်။ ခေါင်းကို ဘယ်သောအခါမှ ပျော့ပျောင်းစေမယ့် Lour တခါသုံးလူအုပ်ဦးထုပ်များကို ဆန့်တန်း၍ ချိန်ညှိနိုင်သော Elastic Band ပါ၀င်သော ဦးခေါင်းသည် သင့်ဦးခေါင်းကို ပြီးပြည့်စုံစွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည် သင့်ဦးခေါင်းကို တင်းကျပ်ပြီး ချည်နှောင်ထားခြင်းမရှိစေဘဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤတစ်ခါသုံးဆံပင်ကျော့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အိမ်၊ ဆေးရုံ၊ spa၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သော အလုပ်နေရာ၊ မတော်တဆ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို မကြောက်ပါ။
1.Mterial : PP ယက်မဟုတ်သော၊ ယက်မဟုတ်သောအထည်၊ polyproplene
2.Size : 18''၊21''၊24''
4. ပိုးသတ်ခြင်းအမျိုးအစား- မြုံမဟုတ်သော
10 နှစ်ကျော်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ZHONGXING အဖွဲ့သည် Medical Cap ထုတ်ကုန်စီးရီးများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
သင်နှင့်အတူ လူသားဖြစ်တည်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။.
1.ယက်မဟုတ်သော အဆိပ်မရှိသော polypropylene ထည်နှင့် နှစ်ထပ်အားဖြည့်ထားသော elastic belt ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် super-sound thermosynthetic နည်းပညာကြောင့် ထုတ်ကုန်သည် ပျော့ပျောင်းပြီး ခိုင်ခံ့လှပပါသည်။
2.တစ်ခါသုံး၊ သန့်ရှင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး၊ ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေကာ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို ထိထိရောက်ရောက် ရှောင်ရှားပါ။
3.လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် အဏုဇီဝပိုးများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
4.လျှော်ဖွပ်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော၊ အဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျသော၊
5.တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မဝတ်ပါနှင့် ဓါတ်မတည့်မှု မရှိပါ။
တစ်ကြိမ်သုံး ဆေးထုပ် 100 ထုပ်
5.တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မဝတ်ပါနဲ့။အချိန်၊ ဓါတ်မတည့်မှု မရှိပါ။
တခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဦးထုပ် ဆံပင် ယက်မဟုတ်သော Ce Strip Mob Cap ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ကလစ် ခွဲစိတ်ခန်း ဦးခေါင်း Bouffant Cap Nursing Net
18"/19"/20''/21''/24'' သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်သည်။
10gsm၊ 12gsm၊ 14gsm၊ 16gsm သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်သော
100pcs / အိတ်, 2000pcs / carton
အဖြူ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင် စသဖြင့်
နမူနာ & OEM
ယခင်- တရုတ်နိုင်ငံတွင် အရောင်းရဆုံး တစ်ကိုယ်ရေသုံး ဆေးရုံ ခွဲစိတ်ကုတင်စာရွက် ဆေးဘက်ဝင် ရေစိုခံ ကုတင်အဖုံး ပြားချပ်ချပ်များ
နောက်တစ်ခု: တခါသုံး ဆေးဘက်ဝင်ကော်ပရက်စ် Cotton Gauze Spuare Pad 100% စုပ်ယူနိုင်သော၊
Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, Mask အလုပ်, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask,